EyeDwarha 29, 2013 admin omnye 0
The name CCTV stands from Closed Circuit Television. Yonke indlela kwinkulungwane edlulileyo, ucupho Ikhamera usiba kubaluleke ngakumbi ukugcina emsebenzini wakho okanye indlu ekhuselekileyo ekhululekileyo bengenamvume. Kubalulekile kwakhona ndlela ingabizi kakhulu ngempumelelo iintshukumo zokwaphulwa kwemithetho yendlela.
imifanekiso CCTV ingasetyenziswa njengobungqina enkundleni, kwaye ungacela ushicilelo CCTV of ngokwakho.
Kule mihla, ucupho Ikhamera kuyimfuneko ukuba yonke ukuba abantu abafuna ukuba ukusebenza loo .
Phila ube ekhuselekileyo, lula and close.
Ikomityi yelizwe 2014 : Ibhola Nge Camera In-eyakhelwe ukuba Used in Brazil
esixhasiweyo Samsung Intel Inombolo kanomyayi umlawuli wesixhobo isixhobo Model Nokia ICPU Inkxaso Series Driver Graphics HD 64-bit Windows OS-UKULONDOLOZWA yenkcukachaName nokuVavanyelwa ekutolikweni software Injongo Public Technology inkxaso umqhubi Technology_Internet
Sony Ericsson Inkxaso Series Driver Samsung Galaxy OS-UKULONDOLOZWA inkxaso umqhubi software ekutolikweni Inombolo kanomyayi isixhobo Model Intel ICPU Nokia Umncedisi Intel Technology 64-bit Windows esixhasiweyo smartphones umlawuli wesixhobo Injongo Public nokuVavanyelwa Graphics HD Qualcomm Samsung Technology_Internet yenkcukachaName